> Resource > iPad > Sida loo sii qulquli Movies in iPad la Loss No
Waxay leeyihiin qaar ka mid ah filimada fiican in aad kombuutarka oo aad rabto inaad sii qulquli in aad iPad? Waa quruxsan fudud marka aad leedahay waxtar leh iPad qalab kala iibsiga filim. Waa TunesGo Wondershare (user Windows). Iyada oo ay caawimo, aad si loogu badalo oo sii qulquli wax videos, oo ay ku jiraan filimada la qaabka leheyn, si aad iPad aan dadaal kasta oo ay awoodaan. Waxa aad u yaab waa in wax ay ka saarto filimada jir on your iPad samayn karaa. Sidaa darteed, waa run ahaantii mid caawisa oo ku wanaagsan in ay sii qulquli filimada aad iPad.
Haddii aad go'aansato inaad sii qulquli filimada ee iPad ka Mac , waxaad u tagi kartaa si Wondershare TunesGo (Mac) . Waxaa ka shaqeeya si la mid ah sida version Windows ma.
Download this iPad kala iibsiga movie qalab aad kombuutarka.
Fiiro gaar ah: Download version daaqadaha ama version Mac of qalab aad kombuutarka. In qayb hoose, waxaan jeclaan lahaa in uu ku tuso tallaabooyinka falay version Windows ah.
Sida loo sii qulquli filimada in iPad
Ku rakib iyo waxa maamula. Markaas, aad arki doonaa suuqa kala xiriir.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo waa la jaan qaada iPads badan. Fadlan hubi iPads ku taageeray, macruufka ah, qaabab movie in loo rogi karaa halkan.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad in kombuutarka
First of dhan, xiriiriyaan iPad in PC ka via cable USB soo socda aad iPad. Tani iPad qalab kala iibsiga filim lagu ogaan doonaa iPad sida ugu dhaqsaha badan. Markaas, aad ku eegaan kartaa dhammaan xogta aad iPad ka furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. movie Stream in iPad
In geedka buugga bidix, guji "Media". Markaas, guji tab labaad - "Movie" on line ugu sareeya. All aad filimada iPad waxaa lagu muujiyey in uu furmo filimka.
Ka hor inta filimada hoorto in iPad, ogolaanaysaa 'dhigay tayada filim marka hore. On dhankiisii ​​midig iyo sare, guji icon labaad. In menu pop-up ah, waxaad riixi kartaa "Meeshay" iyo "Video Conversion". Waxaad ka heli 3 video tayada tahay doorashada ka. Waxay yihiin tayada yar yahay, oo tayo sare leh oo tayo leh oo caadi ah. Dooro mid aad jeceshahay.
Markaas, u yimid inuu suuqa kala filimka. Guji "Add" inay soo qaadaan suuqa kala file browser. Browse your computer ilaa aad ka heshid filimada aad doonayay. Markaas, qulquli filimada aad iPad. Haddii aad jeceshahay in aad sii qulquli folder filim aad iPad, oo aad samayn kartaa adigoo gujinaya saddexagalka hoos "Add"> "Add Folder"
Marka ay tani iPad qalab kala iibsiga movie ogaadaa in filimada huleeshay leeyihiin qaabab leheyn, waxaad riixi kartaa "Haa" si loogu badalo filimada si ay iPad qaab filaayo - MP4.
Download this iPad qalab kala iibsiga movie inay sii qulquli filimada aad iPad.